माघीमा दर्शकको भिडले हल भरियो, निर्माताको लगानी सुरक्षित हुने देखियो ! « Mazzako Online
माघीमा दर्शकको भिडले हल भरियो, निर्माताको लगानी सुरक्षित हुने देखियो !
मज्जाको अनलाईन समाचार, काठमाण्डौं, माघ ०२–
यो शुक्रबार मल्टिप्लेक्स लक्षित नम्रता श्रेष्ठको ‘‘सोल सिस्टर’ बाहेक कुनै पनि नेपाली फिल्म सार्वजनिक प्रदर्शनमा नआएपछि गत हप्तादेखि प्रदशर्नमा आएका तीन नेपाली फिल्म ‘तथास्तु’, ‘आभाष’ र ‘अलबिदा’ ले दोश्रो साताको प्रदशर्न यात्रा पक्का गरेका छन् । यो शुक्रबारबाट प्रदर्शनमा आउने भनी प्रचार प्रसार समेत गरिएको फिल्म ‘‘इच्छा’ ले अन्तिम समयमा आएर प्रदर्शन मिति रोकेको थियो । माघे संक्रान्तिको छेको पारेर प्रदशर्न भएका तीन फिल्मको व्यापार भने कस्तो रह्यो त ? माघीमा दर्शकको साथ पायो ? आउनुस संक्षेपमा चर्चा गरौं ।